Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 5 May 2018 – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioOromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 5 May 2018
Buttaa- Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan. https://t.co/uNsTqqKkLL pic.twitter.com/LDIGzBxDub
— Kichuu (@kichuu24) May 5, 2018
Caamsaa 5/2018 Godina Baalee Roobeetti Sochiin Warraaqsa FXG Qeerroo Bilisummaafi Uummatan daran jabaachuun itti fufe. Simannaan MM Dr Abiy Ahmedi Waarraqsaatti jijjiirame . Qeerroofi Uummaatni Oromoo Godina Baalee Gaaffii mirgaa bifa kanaan finiinsuun warraaqsi dhowe!!
1. Gootota ilmaan Oromoo kanneen Maqaa Gootota Oromoo kanneen utuu lubbuun jiruu ukkamsamanii achii buuteen isaanii dhabamee kanneen akka Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawwanoofi Ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’aman ukkanfamanii ija uummataafi maatii jalaa dhokfaman atattamaan haa gadhiifaman. Hidhamtootni Ilmaan Oromoo hundi atattamaan haa hiikaman.
2. Waraanni komaandi Poostii atattamaan nurraa haa kaafamu!!
3. Hayyamni haaromsa Midrok dhabbata yaakka sanyii balleessuu uummata Oromoo irratti rawwachaa jiruuf godhamaa jiru atattamaan haqamee, yakka sanyii balleessuu uummata Oromoo irratti rawwatameef abbaan qabeenya Midrok She Huseen Allammuddiifi aangawootni hayyama kana kennaniifi ammas haaromsaa jiran itti gaafatamuu qabu, qabeenyaan warqee saamameefi uummata keenya yakki irratti raawwateef beenyaan kaffalamuufi qaba!!
4. Maqaa haaromsa jedhuun kaabinoota sadarkaa garaagaraa irratti yakka uummatarratti dalagaa jiraaniif carraa guddinaafi muudama kennuufiin yakka, kanneen ilmaan Oromoo ajjeesaafi ajjeesisaa, saamaafi saamsisaa turan seeraatti haa dhiyaatan.
5. Waraanni maqaa Liyuuhayilii Somaalee kan waraanaa mootummaa Ethiopian deeggaramuun lola itti fufinsan nurratti gaggeeffamaa jiruuf qaamni mootummaan ajaja dabarsuun uummata keenyaa kumoota dhibbootaan lakkaa’aman qe’eerraa buqqisiisanii, hedduun madaa’eefi kanneen wareegamaniif itti nuuf haa gaafataman. Beenyaan uummata keenyaa qe’eefi qabeenyaarraa buqqa’eef haa kanfalamu .
Gootota Oromoo lubbuun wareegamaan faarsuun Uummata gowwomsuuf yaaluun hin danda’amu. Gootoota Oromoofi Uummata Oromoo jaalattanii miti dirqama faarsitu, kana Qabsootu fidee, injifannoo dhiigaafi Lafee Qeerroofi gootota uummata Oromoon argamedha; kun gootummaafi ejjennoo Qeerroo Bilisummaafi uummata Oromooti. Uummatni keenya waadaa afaaniifi siyaasaa summii dammaan makaa irratti dammaqe jiraachuun akka kana kunoo!! Kanaan boodaa waadaa hojiitti hiikuu hin dandeenyeen uummatni sobamuun ni dhaabbata. Lafarratti hojjedhaa argisiisaa uummataaf kana isiniif hojjennee jedhaa gabaasa. Malee waan afaaniin uummata Sobuu kana uummaatni irraatti dammaqeera!!
Gabaasa Qeerroo Bilisummaa Baalee Roobeerraa!!